चितवन निकुञ्जका राम–लक्ष्मण एक हजारको नोटमा – Sulsule
१९ असार २०७९, आईतबार
चितवन निकुञ्जका राम–लक्ष्मण एक हजारको नोटमा
admin २०७७ साउन ८ गते १५:४९ मा प्रकाशित
नेपाली नोटमा विदेशी हात्ती प्रयोग भएको गुनासो आएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपालमा पाइने हात्तीको तस्बीर प्रकाशन गरेको छ । नोटमा प्रयोग भएका हात्ती चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा जन्मिएका जुम्ल्याहा राम–लक्ष्मण हुन् । यस अघिका एक हजारको नोटमा एउटा हात्तीको चित्र अङ्कित थियो भने अहिलेको नोटमा दुई हात्ती रहेका छन् । ती हात्ती अहिले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको सुरक्षामा खटिइरहेका छन् ।
यस अघिको नोटमा अफ्रिकन हात्ती रहेको थियो । अहिलेका राम–लक्ष्मण चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको हात्ती प्रजनन् केन्द्र सौराहामा जन्मिएका हुन । केन्द्रका निमित्त प्रमुख जलेन्द्र चौधरीका अनुसार देवीकलीले जुम्ल्याहा जोडी जन्माएको थियो । आमा देवीकली हुन् भने यिनीहरुका बाबु रोमियो नामको जङ्गली हात्ती हो । रोमियोले समय समयमा मानव बस्तीमा गएर वितन्डा पनि मच्चाउने गर्दछ । विगत लामो समयदेखि प्रजनन् केन्द्रमा पालैपालो रोमियो र ध्रुवेले प्रजनन् गराउँदै आएका छन् । निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत नारायण रुपाखेतीका अनुसार विसं २०६५ कात्तिक २१ गते यो जुम्ल्याहा जोडी जन्मिएको हो ।
हात्तीको जुम्ल्याहा दुर्लभ हुने गर्दछ । रुपाखेतीले भन्नुभयो, “मैले थाइल्याण्डमा जुम्ल्याहा जन्मिएको तर बचाउन नसकिएको सुनेको थिए, अरु ठाउँमा सुनेको छैन ।” उहाँको भनाइमा जुम्ल्याहा जन्मिएर बाँचेको सम्भवत यो पहिलो र एक मात्र हो । हाल राम सौराहाको हात्तीसार र लक्ष्मण कसराको हात्तीसारमा रहेका छन् । उनीहरुलाई तीन वर्ष छ महिना पुगेपछि विनोद चौधरी नाम गरेका दुई जना कर्मचारीले तालीम दिएका हुन ।
तालीमपछि निकुञ्ज सुरक्षामा यी दाजुभाई जुटिरहेका छन् । राम दाजु हुन भने लक्ष्मण भाई हुन् । १२ वर्ष हुन लाग्दा यी दाजुभाईको फोटो नेपाली एक हजार रुपैयाँको नोटमा छापिएको छ । अहिले छापिए पनि झण्डै सात वर्ष अघि उनीहरुको फोटो खिचिएको हो । त्यतिबेला करिब पाँच वर्षको उमेरका राम–लक्ष्मणको फोटो अहिलेको नेपाली नोटमा आएको बताइएको छ । यी दुवै भाले हात्ती हुन । हात्तीको भालेलाई गज र पोथीलाई कली भनिन्छ ।(रासस)
एमालेले सीसीटीभी फुटेज सार्वजनिक गर्न माग र्‍गयो ! फुटेज डिलिट…
अन्तरघातको छानबिनका लागि एमालेद्वारा विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा समिति गठन
नेपाल-चीन सैन्य सम्बन्ध: कुनै बेला ‘एन्टी एअरक्राफ्ट गन’ किनेको नेपालले…
माओवादी केस बैठक : साङ्गठनिक अराजकता हटाउनेदेखि आगामी योजनासम्म (यस्तो…
नेपाल-भारत: गहुँ आयात गर्न नपाए ‘दशैँमा अभाव’ हुनसक्ने चेतावनी
कपन बानेश्वर सम्मान सात जनालाई
‘विश्व अर्थतन्त्रमा आफ्नो ‘इन्ट्रेष्ट’मा मात्रै काम हुन थाले समस्या आउन…
जेलबाट छुटेपछि प्रजाले थप चार गैँडा मारे
विकास भनेको के हो र कसरी गर्ने ?
काठमाडौंमा हैजाको त्रास
नेपालमा पर्यटनको विकास : समस्या र समाधानको उपाय